Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : April 2014
တကိုယ်တော် သူရဲကောင်း ဂျူနီယာဝင်း
ဂျူနီယာဝင်း၊ ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၄
လုပ်ဖို့ ပြောဖို့ တိုက်ဖို့ အဘမှာ သတ္တိ ရှိတယ်။
အဘရေ ….. အဘထွက်ခွာသွားတဲ့နေ့
ရင်ဆိုင်ဖို့ သတ္တိ ပေးခဲ့ပါဦးလေ။
(Illustration – Than Htay Maung
Posted by Junior Win at 8:22 AM No comments:
မြန်မာနေ့ရက်များနှုင့်ပန်းများ ဂျူ နီယာဝင်း
(Junior Win ရေးသားထားသောအင်္ဂလိပ်လုိုရေး Burmese Days and Flowers (Kindle Ebook), သုို့မဟုတ် Days and Flowers of Myanmar (မြန်မာပြည်ကပါရမီစာအုပ်တုိုက်ထုတ်) ကုိုကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ထားသည်။၂၀၁၃ခုနှစ်ထုတ် စာအုပ်ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာသကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ်ကုိုအဓိကထားရွှေ့ ရေးသားထားပါသည်။))
ကျွနုိုပ်တုို့သည် မြန်မာနှစ်သစ်ကုို ၃ရက် သုို့မဟုတ် ၄ရက် သင်္ကြန်ရေကစားပွဲ ကျင်းပလျက် ကြိုဆုိုလုိုက်ကြပါသည်။ မြန်မာနှစ်သစ်သည်ဧပြီလ ၏ဒုတိယပတ် ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့ တွင်ကျရောက်ပြီးဧပြီလ ၁၅ရက် သို့မဟုတ် ၁၆ ရက်နေ့တွင် အဆုံးသတ်ပါသည်။ ဧပြီ ၁၂ ရက်နေ့သည် သင်္ကြန်ရေကစားပွဲအကြို နေ့ဖြစ်ပြီး ဧပြီ ၁၅ သုို့မဟုတ် ၁၆ ရက်နေ့သည် သင်္ကြန်ပွဲတော် နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ် ပါသည်။ ရေကစားပွဲ၏ စစ်မှန်သော ပြယုသ်သည်ကားချစ်ခင်သောသူငယ်ချင်းများကုို တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အပြန်အလှန် သန့်ရှင်းသောရေဖြင့် ပက်ဖြန်းကြခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထုိုဧပြီတစ်လလုံးသည် မြန်မာလူမျိူးများ ဥပုဉ်သတင်းစောင့်ကြရာ၊ အလှူဒါနပြုကြရာ၊ ကောင်းမူကုသုိုလ်များ ပြုကြရာနေ့များဖြစ်ပါသည်။
ရှေးရုိုးရာပုံပြင်များအရ ကောင်းကင်ယံကအရှင်သခင် သိကြားမင်းကြီးသည် လူ့ပြည်သုို့ ထုိုနေ့များတွင်အလည်တစ်ခေါက် အရောက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် သိကြားမင်းကြီးအားဘုရားရှင်၏ သာသနာတော်သည် လူ့ပြည်လူ့ရွာတွင် ဘယ်လောက် လွှမ်းခြုံနေပြီလဲဆုိုတာကုို သွားရောက်ကြည့်ရူရန် အတွက် ယုံယုံကြည်ကြည် တာဝန်လွှဲအပ်ထားသည် ဟုဆုိုပါသည်။ သိကြားမင်းသည် လူ့ပြည်သုို့ဆင်းကာလူတွေ ဗုဒ္ဓ၏ ဟောကြားချက် အတုိုင်းလုိုက်နာကြပါရဲ့ လားဟူ၍ လာကြည့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ “သူကအမှန်တရားသည် တည်နေပါရဲ့လားဆုိုတာကုို လာကြည့်ပါမည်။ သူကကောင်းသူကုို ကယ်တင်ကာမကောင်းသူကုို ပယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။“ ကျွနုိုပ်တုို့အနေနှင့်တော့ သူတကယ်တာဝန်ကျေသလား ဆုိုတာကုိုမသိပါ။ ဒါပေမယ့် သေချာတာတစ်ခုတော့ရှိပါသည် သူကမြန်မာနှစ်သစ်မှာ ရောက်လာကာလူတွေ ဘာသာရေးကောင်းမူကုသုိုလ် လုပ်ဖုို့တာဝန်ကျေကြဖုို့ သတိပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ သိကြားမင်းကြီးသည် လူ့ပြည်သုို့ ဆင်းလာကာ ဗုဒ္ဓလမ်းညျွန်ခဲ့သည့်အတုိုင်း လူတွေနေထုိုင် ကျင့်သုံးနေကြပါရဲ့လား ဟုလာကြည့်ပါမည်။ သူကသင်္ကြန်ပွဲတော် နောက်ဆုံးနေ့မှာ သူ့ဌာနေကောင်းကင်ယံသုို့ ပြန်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၂၀၁၃ ခုနှစ် မြန်မာသင်္ကရာဇ် ၁၃၇၅ မဟာသင်္ကြန်စာ)
(ဒေါ်) ခင်မျိူးချစ် ရေးသားသောColourful Burma ဟူသောစာအုပ်တွင် ယခုလုိုရေးသားထားတာတွေ့ရပါသည်။“သင်္ကြန်စာ - ကျွနုိုပ်တုို့ ယခုတုိုင် ယုံယုံကြည်ကြည် ဖြင့်ဖတ်နေဆဲ အဲသည် စာရွက်ပေါ်ကစာဖြစ်ပါသည်။ ဒါကုိုသင်္ကြန်စာဟုခေါ်ပါသည်။ သင်္ကြန်စာတွင် ယခုလာမည့်နှစ်တွင် ဘာဖြစ်မယ် ဆုိုသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ရေးသားထားပါသည်။ ကျွနုိုပ်တုို့အတွက် အနာဂါတ်ဟောကိန်း သဘောဖြစ်ပါသည်။ သိကြားမင်းက ဘယ်လုိုပုံစံဖြင့် ကျွနုိုပ်တုို့ဆီဆင်းလာမည် ဆုိုတာကုိုလည်း ရေးသားထားပါသည်။ ဥပမာ - သိကြားမင်းသည် သည်နှစ်မှာတော့ နဂါးကုိုစီးလာပါမည်။ လက်တစ်ဖက်တွင် မျှားနှင့် လေးကုိုကိုင်လာမည်။ နောက်လက်တစ်ဖက်မှာတော့ လှံကုိုကုိုင်လာမည်။“ အုို…. ဘယ်လောက်အရေးကြီးတဲ့ သိကြားမင်းပါလဲ! သူဒီနှစ်ဘာစီးလာမှာပါလိမ့်! သုို့မဟုတ် သူဒီနှစ် ဘာများကိုင်လာမှာပါလိမ့်!…. ကျွနုိုပ်တုို့သည် ထုိုအရာများကရှေ့နှစ်ဘာဖြစ်မယ် ဆုိုိတာကုိုပြောမည့် အရာများအဖြစ် ယုံကြည်နေကြပါသည်။
ကျွနုိုပ်တုို့သည် ထုိုစာတစ်မျက်နှာစာရှိသောစာရွက်ကြီးကို သက်ြန်မတုိုင်မှီမှာ ၀ယ်ကြပါသည်။ ပြီးတော့ သေချာဖတ်ကာသူပြောထား သလုိုလုိုက် လုပ်ကြပါသည်။ ဟုတ်ပါသည်- ကျွနုိုပ်တုို့ အားလုံးတစ်ယောက်စီအတွက် နေ့အလုိုက် ဘာလုပ်ရမည်ဆုိုတာ အဲသည်စာရွက်ထဲမှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။ တခါတရံ ယခုလုိုရေးထားပါသည် - “တနဂနွေနေ့မွေးသူများခေါင်းလျော်ပြီးနောက် ကန့်ဂေါ်ပန်းများကုိုပန်ပါ - တနလာမွေးသူများကတော့ ကျမ်းမာရေးကောင်းဖုို့ အဖြူရောင်ကုိုရွေးပါ - စနေနေ့မွေးသူများ အတွက်တော့ အရေးတကြီးပုဂိုလ်များနှင့်တွေ့ ဖုို့ရှိရင် စိန်လက်စွပ်ကလေးစွပ်သွားပါ - ဗုဒဟူးနေ့မွေးသူများအတွက်တော့ တစ်ခုခုအရေးတကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချ ဖုို့ရှိရင် အစိမ်းရောင်ကိုတော့ လုံးဝလုံးဝရှောင်ရမည်……..စသည်စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ သင်္က်ြန်စာသည် တုိုင်းပြည်၏အနာဂါတ်၊ တကမ္ဘာလုံး၏ နုိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ စုိုက်ပျိူးရေး၊ လူမူရေး၊ ရာသီဥတုအစရှိသည်များကုို လည်းဟောကိန်းထုတ် ထားပါသည်။ သူကယေဘုံယအားဖြင့် ဟောထားသည် ဖြစ်သောလည်း ဒါကုိုဖတ်ရတာစိတ်လှူပ်ရှားစရာ ကောင်းပြီး မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိူးများကြားတွင် ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာက သင်္ကြန်စာမှာယခုလုိုရေးတာတွေ့ဖူးပါသည် - သည်မြန်မာနှစ်သစ်မှာတော့ ခေါင်းဆောင်ပုိုင်းဆုိုင်ရာကောင်းသော အပြောင်းအလဲများ ကြုံရဦးမည်။ ကျွနုိုပ်တုို့လည်းတုိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းသောနေ့ရက်များ ရောက်လာဖုို့ မျော်လင့်လျက်ရှိပါသည်။
သိကြားမင်းသည် လူ့ပြည်သုို့ဆင်းလာသည့်အခါ သူ့မှာအလွန်အရေးကြီးသော တာဝန်တစ်ခုကုို လုပ်ရမှာဖြစ်သည်ဟု ကျွနုိုပ်တုို့ ယုံကြည်ကြပါသည်။ သူ့တွင် ရွှေပရပုိုဒ်နှင့် ခွေးသားရည်ဟူရွေ့ ပေလွှာနှစ်ချပ် ပါလာပါသည်။ ကောင်းသောလူများ၏ အမည်များကုိုရွှေပုရပိုဒ်တွင် ရေးမှတ်ကာမကောင်းသော သူများကုိုခွေးသားရေတွင် မှတ်သည်ဟူ၏။ ဒါဆုိုရင် ဘယ်ပုရပုိုဒ်မှာဘယ်သူပါပြီး ခွေးသားရေမှာ ဘယ်သူပါမည်ဆုိုတာ အထူးရှင်စရာမလုိုပါ။ ကျွနုိုပ်တုို့ ထုိုသင်္ကြန်ရက်တွေမှာ မသတ်ရ၊ မခုိုးရ၊ မညာရ၊ မဆဲဆုိုရ၊ တပါးသူကုိုနာကျင်အောင် မလုပ်ရပါ။ အကြောင်းမှာ သိကြားမင်းက ကျွနုိုပ်တုို့အမည်များကုို ခွေးသားရေမှာမှတ်လုိုက်လိမ့်မည်။ ဒါဟာဂုဏ်ကျက်သရေကင်းမဲ့ခြင်း၊ အပြစ်ပေးခံရခြင်းပင်။ ကောင်းသောသူများသူတုို့အမည်ကုို ရွှေုပုရပုိုဒ်မှာ ရေးမှတ်ခံရခြင်းကာ ဂုဏ်ပြုခြင်းခံရခြင်း မည်ပေသည်။
ကျွနုိုပ်ငယ်စဉ်က ကျွနုိုပ်အမည်ကုို ခွေးသားရေတွင် မှတ်သွားမှာ အလွန်ကြောက်ပါသည်။ သည်တော့ ကောင်းတာတွေကုို ကြိုးစားလုပ်ပါသည်။ လူကြီးတွေကလည်း ထုိုသင်္ကြန်နေ့ တွေမှာလိမ်လိမ်မာမာနေဖုို့ ပြောပါသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ နှစ်သစ်ဆုိုတာ နှစ်ဟောင်းကစုဆောင်းယူလာခဲ့သမျှ သောမကောင်းမူတွေ ကုိုသန့်စင်ပစ်ကာ ဘ၀အသစ်ကုို ကူးပြောင်းဖုို့ ဖြစ်ပါသည်။ သည်တော့ “သင်္ကြန်အုိုး“ ကုိုအိမ်ရှေ့မှာထားကာသိကြားမင်းကြီးကုို ကြိုဆုိုလုိုက်ကြရအောင်။ ဒါဟာလည်း ကျွနုိုပ်တုို့လုပ်သည့် ကောင်းမူတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါလော။ ပြီးတော့ သိကြာ်းမင်းကြီးက သူ့ကုိုကြိုဆုိုသည့် သင်္ကြန်အုိုးကြောင့် ရွှေပုရပုိုဒ်မှာ ကျွနုိုပ်တုို့အမည်ရေးမှတ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကဲ… အလှဆုံးအကောင်းဆုံးသင်္ကြန်အုိုးဖြင့် ကောင်းကင်ယံ၏ အရှင်သခင် သိကြားမင်းကြီးကုို ကြိုဆုိုလုိုက်ကြရအောင်။ ကျွနုိုပ်တုို့အမည်သည် ရွှေပုရပုိုဒ်မှာရှိပါစေသတည်း။
(သိကြားမင်းသည် လူ့ပြည်သုို့ဆင်းလာသည့်အခါ သူ့တွင် ရွှေပရပုိုဒ်နှင့် ခွေးသားရည်ဟူရွေ့ ပေလွှာ နှစ်ခုပါလာပါသည်။ ပုံ -ကာတွန်းမောင်ရစ်)
အထက်ပါပုံတွင် ပန်းတွေနှင့် အုိုး အတွဲကုို “သင်္ကြန်အုိုး“ ဟုခေါ်ပါသည်။ ဒါ သိကြာ်းမင်းကုို ကြိုဆုိုတဲ့အုိုးဖြစ်ပါသည်။ သူကလူ့ပြည်ဆင်းဖုို့ မေ့သည်ဖြစ်စေမမေ့သည်ဖြစ်စေ။ ကျွနုိုပ်တုို့ကသူ့ကုို ကြိုဆုိုဖုို့မမေ့ပါ။ သင်္ကြန်အုိုးကုိုအိမ်ရှေ့ နေရာကောင်းကောင်းလေးမှာ ထားပါသည်။ သိကြားမင်းကြီးကတွေ့မြင်ပြီး ကျွနုိုပ်တုို့အမည်ကိုသူ၏ ရွှေပေလွာလေးမှာရေးပါစေသား။
(တခါတရံသင်္ကြန်အုိုးရောင်းသူများက သိကြားမင်းကြီး ပြန်သွားသည့်နေ့ကုိုကြည့်ရွှေ့ သင်္ကြအိုးနှစ်အုိုး ၀ယ်ဖုို့ပြောပါသည်။)
တခါတရံသင်္ကြန်အုိုးရောင်းသူများက ကျွနုိုပ်တုို့ကုိုသင်္ကြန်အုိုး နှစ်အုိုး ၀ယ်ဖုို့ ပြောပါသည်။ အကယ်ရွှေ့များအသင်တုို့၏ မိသားစုဝင်တစ်ဦး၏ မွေးရက်သည် သိကြားမင်းသူ့ဌာနေ ပြန်သောနေ့ (တနည်းအားဖြင့် သင်္ကြန် အတက်နေ့) နှင့် တစ်နေ့တည်းဖြစ်နေလျှင် အသင်တော့သင်္ကြန်အုိုး နှစ်အုိုးဝယ်ရပါမည်။ တစ်အုိုးကသင့်မိသားစုအတွက် နောက်တစ်အုိုးကသိကြားမင်းပြန်တဲ့နေ့နှင့် တုိုက်နေသော မွေးနေ့ရှင် သင့်မိသားစုဝင်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ သူတုို့အတွက် သိကြားမင်းကုိုသင်္ကြန်အုိုး နှစ်အုိုးဖြင့် ကြိုဆုိုရပါမည်။ ဥပမာ - သင်္ကြန်အတက်နေ့က စနေနေ့ဆုိုပါစုို့။ သင့်အဘွားမွေးနေ့ကစနေနေ့ဆုိုလျှင် သင်တုို့အိမ်အတွက် သင်္ကြန်အုိုး နှစ်အုိုးဝယ်ရမည်။ နောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့ အကယ်ရွှေ့ သင်္ကြန်အတက်နေ့က ကြာသာပတေးနေ့ဖြစ်ပြီးသင်က ကြာသာပတေးနေ့မွေးသောသူဖြစ်လျှင် သင်္ကြန်အုိုး နှစ်အုိုးဝယ်ရမည်။ နောက်ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့် ဆုိုရသောသင်္ကြန်အတက်နေ့က သောကြာနေ့ဖြစ်ပြီးသင်တုို့ မိသားစုမှာတစ်ယောက်မှ သောကြာမွေးသူမပါလျှင် သင်္ကြန်အုိုး နှစ်အုိုးဝယ်စရာမလုိုပါ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် သင်္ကြန်အတက်နေ့ ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့သည် အင်္ဂါနေ့ဖြစ်ပါသည်။ သင့်မိသားစုတွင်းမှာအင်္ဂါမွေးသူရှိနေလျှင် သင်္ကြန်အုိုး နှစ်အုိုးဝယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
(ဒီနှစ် မြန်မာသကရာဇ် ၁၃၇၆ သို့ကူးပြောင်းသည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက်တော့ သင်္ကြန်အတက်နေ့က ဗုဒ္ဓဟူး နေ့ကျပါသည်။)
(မြန်မာလူမျိူးများယုံကြည်ကြတာကအကယ်၍ ရက်သတ္တပတ်၏ တစ်ရက်မွေ့နေ့ရှင်သည် သင်္ကြန်အတက်နေ့ နှင့်သွားပြီးတုိုက်နေလျှင် ကံမကောင်းပါ။ ဒါကြောင့် သင်္ကြန်အိုးအပိုတစ်အုိုးလုိုပါသည်။)
(နောက်ဆက်ပြီး ဘာသာပြန်ဖို့စိတ်ကူးရှိပါသည်။ ပရိသတ်များ အတွက်သည်နှစ်အမှီ ရေးပေးလိုက်တာပါ။ ကောင်းသောမြန်မာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ။)
Posted by Junior Win at 8:21 AM No comments:
The Other Side of Burmese Thingyan 2014 April
Posted by Junior Win at 8:27 AM No comments:
ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၁၄
(အင်္ဂလိပ်လုို ရေးသားသော Aung Chan Thar (Hleedan Story) ကုိုကိုယ်တုိုင် ဘာသာပြန်သည်။)
ဘတ်စ်ကားသမားက “လှည်းတန်း” လုို့ဆိုလုိုက်လျှင် ဘတ်စ်ကားပေါ်ကဆင်းကာ “အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်” ကလေးကုို မည်သူမဆုို လမ်းညွှန်ပေးနုိုင်ကာ ရန်ကုန်ကဲ့သုို့သော မြို့ကြီးပြကြီးထဲမှာ သဲကန္တာရထဲက အုိုအေစစ်ကလေးကို တွေ့ရသလုို အောင်ချမ်းသာရွာက လေးကုို တွေ့ရပါတော့မည်။ ကားဟွန်းသံတညံညံ ၀ီစီသံဆူညံသံတွေကြောင့်သာ ရန်ကုန်မြို့ကြီးပြကြီးထဲ သင်ရောက်နေပါလားဟု သင့်ကုို သတိပြုမိစေပါလိမ့်မည်။ အောင်ချမ်းသာအရပ်ထဲကသူတွေပင် သည်ပရ၀ဏ်လေးသည် အိပ်မက်ထဲက ဒေသလေးတစ်ခုအဖြစ် တွေးမြင်နေမှာ ဖြစ်ပါတော့သည်။ မြန်မာဆန်ဆန် သစ်သားအိမ်ကလေးများ၊ တစ်ထပ်တိုက်ကလေးများ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးများ၊ ကလေးများဆော့ကစားရာ မြေနီလမ်းလေး၊ ညနေခင်း တိုက်ခတ်လျက်ရှိသော လေပြေလေညှင်းကလေးများ၊ သစ်ပင်များ၏ အရိပ် အာ ၀ါသများသည် အောင်ချမ်းသာ ရပ်ကွက်ကလေး၏ အေးချမ်းသာယာမှုကို နေ့စဉ် အဓိပ္ပါယ်ဖော်လျှက်ရှိနေပါသည်။
ယခုရေးနေသောဆောင်းပါးသည် တချိန်တခါက အောင်ချမ်းသာဟု အမြင်တွင်ခဲ့သော နေရာဟောင်းလေးတစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်ကလူတွေကတော့ လှည်းတန်းဟူသောအမည်က စိမ်းမနေပါ။ နေ့စဉ်သုံးစကားလုံးလုို လှည်းတန်းဘတ်စကားဂိတ်၊ လှည်းတန်း ဈေး၊ လှည်းတန်းလမ်းမ၊ လှည်းတန်းရပ်ကွက် စသည့်ဖြင့် ပြောဆုိုသုံးနှုန်းနေကြပါသည်။ လှည်းတန်းဆိုတာ အလွန်ကျယ်ပြန့်သောနေရာ – ရန်ကုန်တက္ကသုိုလ်ပင်မနှင့်နီးသော နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အဲသည် လှည်းတန်းဆုိုသော နေရာကျယ်ကြီးမှာ “အောင်ချမ်းသာ” ဟု ခေါ်တွင်သည့် နေထုိုင်သူ ရာဂဏန်း အိမ်ခြေ ၅၀ ခန့်နေထုိုင်သော၊ သူတုို့၏ဘ၀များက အေးချမ်းအေးဆေးစွာ နေထုိုင်နေကြသော ရပ် ကွက်တစ်ခုရှိပါသည်။ ကျွန်မတုို့နေထုိုင်ကြတာက အဲသည်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်နှင့် နီးပါသည်။ အဲသည်နေရာကုို မိနစ် ၂၀ ခန့် လမ်း လျှောက်သွားရင် ရောက်ပါပြီ။ ယခုထုိုလှည်းတန်းမှာရှိခဲ့သော “အောင်ချမ်းသာ” ဟူသော ရပ်ကွက်လေးအကြောင်း - ကျွန်မကုို ယခုတုိုင် နွေးထွေးနေဆဲအတိတ်က အရိပ်ဟောင်းများ – ဟောင်းသွားသော်လည်း ကျွန်မအတွက်တော့ အသစ်ဖြစ်နေဆဲ အဲသည် အောင်ချမ်းသာပုံပြင်လေးကုိုပြောပါမည်။
အောင်ချမ်းသာ (လှည်းတန်း) ရပ်ကွက်လေးမှာ ကျွန်မတုို့အဘုိုးအဘွားများ လွန်ခဲ့သောအချိန်ကာလများက နေထုိုင်ခဲ့ကြသော အိမ်အုို ဟောင်းလေး တစ်လုံးရှိပါသည်။ သည်တော့ အခုကျွန်မတုို့နေထုိုင်နေတာက “ပြည်ရိပ်သာ” ဖြစ်ပြီး အောင်ချမ်းသာက အိမ်ဟောင်းလေးသည် ကျွန်မတုို့၏အဘုိုး ဦးခင်မောင်လတ် စာသင်ကြားရာနေရာလေးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ယခု အဲသည်အကြောင်းကုို ဆက်ပြောပါမည်။
ကျွန်မအဘုိုးတွင် ဦးသိန်းမောင်ဟုခေါ်တွင်သော မိတ်ဆွေရင်းကြီးတစ်ဦးရှိပါသည်။ သူက အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်မှာ နေပါသည်။ ပြီး တော့ ကျွန်မအဘုိုးဖြစ်သူ ဘဘကြီးလုိုပဲ အင်္ဂလိပ်စာသင်သော ဆရာတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ သူတုို့နှစ်ဦးသည် အောင်ချမ်းသာတွင် အတူတကွ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကျောင်းလေးကိုဖွင့်ကာ စာသင်ကြားသောအလုပ်ကို လုပ်ကြပါသည်။ ကျွန်မအဘုိုးသည် အောင်ချမ်းသာ ရပ်ကွက်လေးဆီ နေ့စဉ် လမ်းလျှောက်ကာ သွားပါသည်။ ကျွန်မအဘွား မေမေကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်သည် တခါတရံ ဘဘကြီးနှင့် အဖော်လုပ် ကာ အဲသည်မှာ အင်္ဂလ်ိပ်စာကို အတူတကွ သွားသင်လေ့ရှိပါသည်။ အောင်ချမ်းသာက ထိုကျူရှင်ကျောင်းလေးတွင် ဘဘကြီးနှင့်အတူ အင်္ဂလိပ်စာ လာရောက်သင်ပေးကြသော တခြားဆရာဆရာမများ များစွာရှိပါသည်။
(ဓါတ်ပုံဟောင်းလေး – ဓါတ်ပုံထဲတွင် (လက်ဝဲမှယာ) ဆရာမတစ်ဦး၊ ဦးသိန်းမောင်၊ ဦးခင်မောင်လတ်နှင့် ဦးဘသော် (ဘဘကြီင်္း ဦင်္းခင်မောင်လတ်၏အကို အကြီးဆုံး – ရဲအရာရှိတစ်ဦး၊ ပုလိပ်အရာရှိတစ်ဦးဟူသော ကလောင်ရှင်) တုို့ကုို အောင်ချမ်းသာက ကျူရှင် ကျောင်းလေးတွင် ဆရာများအဖြစ် တွေ့ရပုံ)
ကျွန်မတုို့ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားသင့်သောအရွယ်သုို့ရောက်လာသောအခါ ကျွန်မတုို့မိခင်ဖြစ်သူက ကျွန်မအဘုိုးနှင့် အတူလုိုက်သွားပြီး အဘုိုးသင်သော အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းများကုို လုိုက်တက်ခုိုင်းပါသည်။ ဘဘကြီးသည် သူ၏မြေးကလေးများက သူ၏အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ကုိုလုိုက်တက်ကြတာကုို အလွန်သဘောကျလျက်ရှိပါသည်။
(ကျွန်မတို့အမွှာမောင်နှမနှင့် အဘုိုးအဘွားများနှင့် ကျွန်မတုို့မိခင်တုို့အတူ အောင်ချမ်းသာ ကျူရှင်ခန်းရှေ့)
အောင်ချမ်းသာ (လှည်းတန်း) ရပ်ကွက်ကလေးသည် အလွန်တရာမှ အေးဆေးကာ လူသိများသောနေရာလေးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အဲသည် နေရာလေးအကြောင်းကုို စဉ်းစားမိလုိုက်တုိုင်းမှာ ကျွန်မ၏မှတ်ဉာဏ်များသည် လန်းဆန်းကာ တချို့သော မမေ့နုိုင်သော အမှတ်တရများက တကယ်လုိုပဲ ကျွန်မ၏ရှေ့တွင် ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ အဲသည်ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်ကြသောလူများသည် မိသားစုဝင်များအတူတကွ နေ ထုိုင်နေကြသလိုပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံသင်ကြားသော ကျူရှင်ကျောင်းကလေးများ၊ ဓနုဖြူ ဒေါ်စောရီ၏ထမင်းဆုိုင်တုို့၊ တရုတ်ဟင်းလျာဆုိုင်တုို့၊ အမျိုးသမီးဝတ်အင်္ကျီဆုိုင်တုို့၊ ပါ့စ်ပုို့ဓာတ်ပုံဆုိုင်၊ လက်ဖက်ရည်ဆုိုင်များစသည်ဖြင့် ရောမွှေလျက်ရှိပါသည်။ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၏ အပြင်ဘက်ခြမ်းသည် လှည်းတန်းမီးပွိုင့်နှင့် ပြည်လမ်းကို မျက်နှာမူလျက်ရှိပါသည်။ ထုိုအခါ ထုိုမျက်နှာစာ မှာရှိနေသော ၀င်း ဆံသဆုိုင်ကြီး၊ ယူနီယမ် ဓာတ်ပုံဆုိုင်၊ ဂိုးရှိုး အထည်ဆုိုင်၊ ကိုယုံ ကြေးအိုးနှင့် တရုတ်အစားအစာဆုိုင်၊ ရှမ်းတောင်တန်း စားသောက်ဆုိုင်၊ အလိမ္မာစာအုပ်ဆုိုင်၊ အသောက မန္တလေးဖိနပ်ဆုိုင် စသည် စသည်တုို့ကုို လှမ်းမြင်နုိုင်ပါသည်။
၁၉၈၈ခုနှစ် မြန်မာပြည်မှာ လူထုအုံကြွမူများအပြီးတွင် တက္ကသိုလ်များပိတ်ပါသည်။ ကျူရှင်တွေလည်း ပိတ်သွားပါသည်။ ထုိုအချိန်ကစလုို့ ကျွန်မအဘုိုးသည်လည်း သူ၏အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများကို အောင်ချမ်းသာကနေ ပိတ်လုိုက်ရပါသည်။ ထုိုတက္ကသုိုလ်များပိတ်သွားချိန်မှာ ကျွန်မတို့လည်း အိမ်မှာအားလပ်နေပါသည်။ အချိန်အနည်းငယ်ကြာတော့ ကျွန်မတို့မိဘများ၏ အကြံဉာဏ်ဖြင့် အိမ်မှာ ကျွန်မတို့ မောင် နှမ နှစ်ယောက်ကုို ဘဘကြီးနှင့် မေမေကြီးတို့က အင်္ဂလိပ်စာ သင်ဖြစ်သွားပါသည်။ နေ့စဉ် နေ့လည် ၁၁ နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိ တစ်နေ့ကုို တစ်နာရီ ဂျူးလီယက်ဆီဇာ၊ မက်ဘက်၊ ကလီယုိုပါတရာ အစရှိသော ရှိတ်စပီးယားနှင့် ဘားနတ်ရှောပြဇာတ်များကုို သင်ပေးပါသည်။ ကျွန်မတို့အဘွားလည်း ၀င်ရောက်ကာ စာဆွေးနွေးရင်း ၀င်သင်ပေးပါသည်။ ထမင်းစားပွဲလေးသည် ကျွန်မတို့ စာသင်ခန်းဖြစ်လုိုက်၊ ထမင်းစားပွဲဖြစ်လုိုက်၊ စာဆွေးနွေးရေးမှတ်ကြရာဖြစ်လုိုက် အမျိုးမျိုး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သည်လုိုနှင့် ကျွန်မအကုို၏ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် နှစ်ယောက်၊ ကျွန်မသူငယ်ချင်း တစ်ယောက် နှစ်ယောက် လာပူးပေါင်းရင်းနှင့် ဘဘကြီးတို့၏ အင်္ဂလ်ိပ်စာသင်တန်းလေးက စည်ကား ခဲ့ပါသည်။ အဲသည်ကနေစလုို့ ဘဘကြီးသည် သူ့ဘ၀တစ်လျောက်လုံး စာသင်ခြင်းအလုပ်ကို ပြည်ရိပ်သာနေအိမ်မှာပင် ကွယ်လွန်သည့် အချိန်ထိ လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတော့သည်။
သုို့သော် အောင်ချမ်းသာမှာရှိခဲ့ဖူးသည့် စာသင်ကျောင်းအုိုလေးသည် ကျွန်မအဘုိုးအတွက်တော့ ဘယ်တော့မှ မမေ့နုိုင်သည့် သတိရစရာ ဖြစ်နေဆဲဆုိုတာကုို ကျွန်မသိပါသည်။ ထုိုကျောင်းအုိုကလေးကုို ကျွန်မတို့ အဘုိုးအဘွားများ၏ အမှတ်တရနေရာလေး အဖြစ်သော်လည်း ကောင်း၊ ပြတုိုက်ကလေးအဖြစ်သော်လည်းကောင်း ထိမ်းသိမ်းထားဖုို့ မျှော်လင့်ထားပါသည်။ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်ကလေးသည် ကျူရှင်ကျောင်းများ မရှိတာကလွဲလုို့ ဆက်လက်၍ လှူပ်ရှားအသက်ဝင်လျက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ဘဘကြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ ပါသည်။ မေမေကြီးက ၁၉၉၉ မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မတို့ဘုိုးဘွားများ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးနောက် အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်လေးသည် မထင်မှတ်သော ၀မ်းနည်းဖွယ် အပြောင်းအလဲတစ်ခုနှင့် တွေ့ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထုိုအဖြစ်ဆုိုးကုို ဘဘကြီး မေမေကြီးတို့ မတွေ့မမြင်သွားခဲ့ရတာ ကံကောင်းလေခြင်းလုို့ ဆိုရပါလိမ့်မည်။ ထုိုအဖြစ်ဆုိုးကုို ဘယ်လုိုလုပ် မေ့နုိုင်မှာလဲ။ သူတို့တတွေသာ ထုိုအဖြစ်နှင့်တုိုးမိပါလျှင် သူတို့အသည်းနှလုံးများ ကွဲကြေသွားပါလိမ့်မည်။ အေးဆေးတည်ငြိမ်သော အေးချမ်းလှသည့် အောင်ချမ်းသာ ရပ်ကွက်ကလေးသည် အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ပျောက်ပျက်သွားခဲ့ရလေတော့ ကျွန်မတို့၏အဘုိုးအဘွားများ၏ ကျောင်းခန်းလေးလည်း ထုိုကံဆုိုးမူနှင့်အတူ ပါသွားရပေတော့သည်။ အောင်ချမ်းသာက အမှတ်ရစရာများသည် အောင်ချမ်းသာ၏ ကံဆုိုးမုိုးမှောင်ထဲမှာ အတူတကွ လုိုက်ပါသွားပါတော့သည်။
ယခုတော့ဖြင့် ထုိုငြိမ်းချမ်းသော အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်ကလေး ၏နေရာတွင် ဟိတ်ဟန်အပြည့်ဖြင့် နေရာယူထားသော ၀င့်ကြွား လောက်စရာ အဆောက်အဦကြီးသာ တွေ့ရတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ သူက အေးဆေးသော အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်ကလေး၏ လူအေး လူဆေးများပိုင်ဆုိုင်သောနေရာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာက အပုိုင်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ “လှည်းတန်းစင်တာ” ဟူသောအမည်က အ ဆောက်အဦကြီး၏အပေါ်တွင် ခန့်ညားစွာ ကဗ္ဗည်းထုိုးထားပါလေသည်။ “လှည်းတန်း” ဟူသော အမည်လေးတစ်ခုသည်သာ အိပ်မက်ရွာ ကလေး “အောင်ချမ်းသာ” ၏ အမှတ်တရ အဖြစ်ကျန်ခဲ့ပါတော့သည်။
Posted by Junior Win at 1:26 AM 1 comment: